Phakathi kwabantu abaningi okungavamile azalelwa eRussia, ikakhulu yasekuqaleni ovelele Insizwa okuthiwa Dmitry Vetchinnikov. Nakuba wakwazi iqhaza izinhlelo eziningana, ukunakekela okukhethekile umuntu guy wabanjwa kuphela ngemuva ukubonakala ngoMeyi 2014 e "I Dinner Party" Uhlelo, eyabonakala esiteshini "Ren-TV."
Ngemva nehlazo, ngisho nehlazo lesikhathi kwenzekeni emhlabathini Dmitry ayezilethele inyuvesi yakhe ngenkathi iqhaza ku "The Dinner Party", waba nobuntu ikakhulukazi liyabonakala. ababukeli abaningi TV mdlalo we-TV waqale wezwa igama - Vetchinnikov Dmitry. Ingubani ngempela, kungashiwo abahlulela zokuxhumana elalivuliwe nendlela yokuqala ethola izivakashi.
Dmitry Vetchinnikov wazalelwa e Kazan ngo-August 1993. Kusukela ebuntwaneni, akazange ukuxhumana okuningi, abantu kugwenywe. amahloni Kubi kuholele ngonyaka nantathu ingane endala Kizichesky Isigodlo, lapho abazali kwadingeka ukuba bambambe. Uma uthola imfundo yesibili Dmitry kwabonisa ngokucacile amandla aso engqondo okungavamile. Nguye kuphela ikilasi igolide yakhe indondo. Wafundiswa, phakathi kwezinye izinto, ku Lobachevsky Lyceum, eye okuhloswe ngazo ukufundisa izingane onekhono.
imfundo Post-yesibili ku isikhungo esiqine e Tatarstan Dmitry aqhubeka ubuyise igadle kwezwakala nasezimalini yolwazi lwabo kwesinye isikhungo enamandla ezweni. Ukuthatha kwasekuqaleni ngesikhathi Republican School Olympic ku-physics wakora amaphuzu 100 Russian ulimi ukuhlolwa ngesikhathi, yena kalula owaba umfundi we-Moscow Physical-Technical Institute. Futhi lapha Wenza kahle esikoleni Dmitry Vetchinnikov. MIPT waze bakwazile ukuhlanganisa ne "Ostankino" - okungukuthi, wafunda futhi wasebenza ngesikhathi esifanayo.
Dmitry waqala ukuhlanganisa cwaningo ngomsebenzi lapho eseneminyaka ngonyaka we-Institute yesibili. Yingaleso sikhathi lapho le nsizwa yaba umsebenzi ithelevishini Technical Centre "Ostankino" futhi kusukela ngaleso sikhathi lwavuthela kule umsebenzi isithakazelo esiqotho. Nakuba umfana namahloni lokuqala bathola okuhlangenwe nakho phambi ikhamera - wathatha ingxenye kwelinye uchungechunge izinhlelo "bukhoma impilo yokuzinakekela".
Lapho umfundi asele, Dmitry waqala ukusebenza studio "Amedia", wamenywa ukuba uhlelo "The Dinner Party". Ukubamba iqhaza mdlalo we-TV wathatha ayisekho namahloni Dmitry Vetchinnikov, kodwa ngokuphelele entsha, abakhululiwe. Nokho, kungakhathaliseki bona kuhle namtjhana sibi - iphuzu moot.
Lapha kuba - Udumo!
Ngo-2014 Dmitry wabona izigidi nababukeli uhlelo "The Dinner Party", elimalungu alo wathatha ashintshana ngokungimema ngizodla nomunye ukuvakashela, bese bona ngokwabo bayakwazisa izihambi namakhono Culinary nomunye. The guy wawunika engamakhulu: wamukela izivakashi egumbini yabo ehostela, wabanika ukunambitheka isaladi nge inkukhu kanye asithena kanye isobho wathela esikhundleni emathileyi ku ezibhuqiwe isinkwa, uzama liziphathe elula kalula.
Project abahlanganyeli musa sazise imizamo Dmitry, ngokuletha inani eliphelele amaphuzu amaphuzu ngu kuye kwaba kungalindelekile ongaphakeme. Nsizwa iwine 322 ngesonto th "The Dinner Party", kodwa beza kuye inkazimulo, noma hhayi lapho ayecabanga ukuthi uyoyithola.
Scandal ngemva "I Dinner Party"
MIPT kothisha nabafundi akazange bayakwazisa Rasskazov Dmitriya Vetchinnikova of Isikhungo wakhe, bathola ukuthi ukuziphatha kwabo ubanga amahloni kulesi sikhungo ehlonishwayo. Ngenxa nehlazo kwabheduka emhlabeni guy ukuhambahamba campus ekuphepheni yakhe siqu ukuthi abamphathisa kwezinsuku ezimbalwa.
Ukuze hhayi ukulahlekelwa amalungelo lingaqhubeka owafundiswa kulo inyuvesi, Dmitry Vetchinnikov wanquma ukuqopha umlayezo wevidiyo ukuze abafundi nabasebenzi we-Institute futhi Kwavezwa ukudabuka kwakhe ngenxa yalokho akwenza. Yena wavuma ngokwethembeka ukuthi akazange azame ukulimaza imizwa kanoma ubani, kodwa nje ngifuna ukuzijabulisa bese ukudala nombono omuhle ngabo. Ngokusho kwakhe, yena ngicabange ukuthi enza imigilingwane enjengeye yakhe engenacala kubangele impendulo enjalo futhi kuzobangela ibala ku idumela isikhungo.
Dmitry Vetchinnikov, biography okwenzeka ngemva indaba ihlazo naye abaningi babezibuza isikhathi eside saphela namahloni. zithathwa Iminyaka yokweva eshumini nambili kude ekuphileni kwakhe, zonke izakhiwo, kuye kwaba evulekile futhi nobudlelwano. uzicabangela yena ukuba extroverts nazo zonke izifiso zawo izixhumanisi nge show ibhizinisi.
Ngo Dmitry ukuphila izinkanuko ezintathu: umculo we-classic, cinema iyiqiniso futhi weightlifting. Naphezu umzimba wayo mncane kakhulu, insizwa esencane anezinye izimpumelelo weightlifting ezemidlalo. Nakuba usengumfundi, waba iqhawe alimisa kwa wakhe ekilasini isisindo. "Indlela kwezokuzijabulisa kungavula kwelifa loonyana ngomzimba omuhle akhishwa up", - uthi Dmitry Vetchinnikov, isithombe okubonisa ukuthi namuhla uyazinaka ngokwanele kule.
I Dmitry waziphatha namuhla
Manje Dmitry Vetchinnikova has ezimbili izinkomba womsebenzi walo, futhi akekho kubo ihlobene physics. Okokuqala, wamkhulula rap yakhe Ukwakheka, futhi okwesibili, uhlela ezihlukahlukene izenzakalo zenhlalo nge izinkanyezi. Dmitry isekela ubungani, ngekubambisana ne Nikolaem Dolzhanskim ngemva bobabili baba bhá "Dinner Party" ukuhamba namaqhawe.
Kuthiwa umuntu unekhono kuyinto unekhono konke. Mayelana Dmitry Vetchinnikova singasho ngokuqiniseka ukuthi ungaphandle kwazo yena onesiphiwo ngezindlela eziningi. Kodwa ngaphezu kwakho konke, uyakwazisa ithalente lakhe yaseshashalazini. Nakuba Dmitry neze uyazicabangela neminyaka ayichitha betadisha Physics Nobuchwepheshe Institute, okulahlwayo, kodwa ukuphila kwakhe, wanquma ngiphendukele kolunye amaphupho akho - show ibhizinisi. Manje Dima is ababefundiswe Ubuciko Buciko kanye Institute luthemba yokwakha ama-career elikhulu kulo mkhakha.
Filipp Ri - American umlingisi, screenwriter, umqondisi kanye umkhiqizi
Ethandwa TV ewuchungechunge "idrama Umndeni": nabalingisi izindima
Indlela ugcwalise conditioning air imoto ngezandla zakho? Kukangaki bagcwalise conditioning air imoto? Lapho ungakwazi ukugcwalisa air conditioning emotweni?
Warsaw Station Gatchina